Somalia: Xasan oo Xaal Mastuur Xargaaggtamay! – Rasaasa News
Apr 1, 2014 Baydhabo, mogadishu, somalia
Baydhabo, Apr 1, 2014 – Madaxwaynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxmuud, ayaa xalay iyo habeen hore u hoyday Baydhabo, ka dib kolkii laga soo dayriyey xaalada magalada Baydhabo ay gashay.
Xasarada ka jirta magaalada Baydhabo ee dalka Somaliya oo u dhaxeeya masuuliyiinta dawlada, ayay in badan dusha ka fiirsanayeen abaabulada ay dirayeen ee iska horjeeda. Waxayna xaaladu xumaatay kolkii ay miir dilaacday xumaantii ka soo safartay xagga Xamar.
Magaalada waxaa ka socday labo shir oo is diidan, waxaana xaabada isku raacinayey masuuliyiinta dawlada Somaliya ugu saraysa iyo IGAD, ismana ayna waydiin jirin waxa ka dhalan kara labada shir ee iska soo horjeeda.
Magaalda waxaa laga sameeyey labo maamul oo iska soo horjeeda, mid wuxuu ka kooban yahay lix gabal, midna wuxuu ka kooban yahay saddex gabal. Xasan iyo Jawari waxay si hoose u taageersan yihiin lixda gabal, iyaga ayaan maal galinayey inta uu shirku socday. Shariif Xasan iyo AMISOM, waxay taageersan yihiin Saddexda gabal iyaga ayaana maal galinayey shirkaas.
Xaalada Baydhabo waxay gaadhay car iyo car, ciidamada AMISOM, way awoodi waayeen in ay xaalada dajiyaan, shacabkii magaalada ayaa jidka seexday oo koray gaadiidka AMISOM.
Xasan iyo Jawaari, hoosta ayey ka rixiyeen waxaana u muuqatay in ay guulaysteen eed la,aan. Shariif Xasan wuxuu helay hub iyo saanad ay AMISOM, siisay. Magaalada waxaa ka dhacay dilal aar gudasho ah, waxaana la sugayey kolka ay xabadu bilaaban.
Madaxwayne Xasan iyo Jawaari, imaanshahooda Baydhabo waxaa amray AMISOM, waxaana loo sheegay in ay arinta wax ka qabtaan. Hore dawlada Somaliya si waydsan waxay u taageertay maamulka saddexda gabal.
Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa ka go,an in uu sameeyo maamul ka kooban lix gabal. Kaas oo uu ku baa,bi,inayo maamulka Jubaland, oo uu dagaal adag ku qaaday dhismihiisa, laakiin ay AMISOM ku khasabtay in uu aqoonsado dadku waxa ay rabaan.
Labo habeen iyo labo maalmood kolkii ay Xasan iyo Jawaari Baydhabo joogeen, waxaa la filayaa in ay maanta dib ugu laabtaan Muqdisho xal la,aan. Waxaa kale oo la sheegay in ay diideen in ay taageeraan midna labada maamul, arintaas oo u egg in ay rabaan qorshe cusub oo hor leh, kaas oo sii kordhin doona uun qaska ka taagan gabalada koonfur galbeed ee Somaliya.